Ilaaha ‘baryootanka maqlo’ ayaa raalli ka ah inuu salaadaheenna dhegeysto.—SABUURRADII 65:2
Ilaahay wuxuu binuʼaadanka siiyay hibo cajiib ah. Wuxuu u banneeyay inay salaad kula hadlaan oo ugu sheegaan waxa ay dareemayaan. Nebi Daaʼuud wuxuu yiri: “Kaaga baryootanka maqlow, dadka oo dhammu adigay kuu iman doonaan.” (Sabuurradii 65:2) Laakiin sidee baan u tukan karnaa si uu Ilaahay inoo maqlo oo inoo barakeeyo?”
SI DAACAD AH QALBIGA UGA TUKO ADIGOO ISLA HOOSEEYA
Salaadahaaga waxay kuu banneeyaan inaad qalbigaaga waxba kula hadhin Ilaah hortiis oo ad isaga u sheegtid dareemmadaada runta ah. (Sabuurradii 62:8) Ilaaha Qaadirka ah wuu ku farxaa salaadaha daacadda ah oo qalbiga ka yimid.
ISTICMAAL MAGACA ILAAHAY
Ilaahay cinwaanno badan baa loogu yeeraa haddaba magac keliya oo shakhsi ah ayuu leeyahay. “Anigu waxaan ahay Yehowah, kaasuna waa magacayga.” (Ishacyaah 42:8, NWT) Magaca Ilaahay, Yehowah, Qorniinka Quduuska ah 7,000 oo jeer buu ku yaallaa oo nebiyo badan baa magacaas isticmaalay. Xitaa nebi Ibraahim markuu meel allabari ah Ilaahay u dhisayay “wuxuu u bixiyey Yehowah Yireh.” (Bilowgii 22:14) Innaga xitaa waa inaan magaca Ilaahay caabudaaddeenna ku isticmaalno, weliba markaan tukanayno.
KU TUKO LUQADDAADA
Luqad walba aan isticmaalno, Ilaahay wuu fahmi karaa fekradaheenna iyo dareemmadeenna. Eraygiisa Kitaabka Quduuska ah baa inagu kalsooni geliya “Ilaah inuusan dadka u kala eexan, laakiin kii kastoo Ilaah ka cabsada, xaqnimadana sameeya, quruun kastaba ha ku jiree, Ilaah waa aqbalaa.”—Falimaha Rasuullada 10:34, 35.
Haddaba sidaynu u helno Ilaahay barakadiisa, waa inaan sameyno wax ka badan salaadda. Maqaalka kan ku xigo ayaan ka arki doonnaa waxaan u baahan nahay inaan sameyno.
Wadaag Wadaag U Tuko Raallinimada Ilaahay
wp20 Lambar 3 bog 10